မြဝတီမြို့ ရွှေမြစန္ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်း အတွက်ဟုဆိုကာ မြေသိမ်းဆည်းခံထားရသော တောင်သူ ၃ဝဝ ခန်?? - Yangon Media Group
မြဝတီမြို့ ရွှေမြစန္ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်း အတွက်ဟုဆိုကာ မြေသိမ်းဆည်းခံထားရသော တောင်သူ ၃ဝဝ ခန်??
မြဝတီ၊ ဇွန် ၁ဝ
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နှင့် ငါးမိုင်ခန့်အကွာ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တောင်ဘက်ရှိအတွင်း မဲကနယ်ကျေးရွာမှ တောင်သူများ၏ စိုက်ပျိုးမြေများအသိမ်းခံထားရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပါကျေးရွာသား၊ ကျေးရွာသူ ၃ဝဝခန့်သည် ဇွန် ၁ဝရက် နံနက်ပိုင်းက ရွှေမြစန္ဒီ မြို့သစ်၌ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
”၂ဝ၁၃ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ညီညီက အနိုင်ကျင့်မတရားသိမ်းယူပြီး အကွက် တွေ ရိုက်ရောင်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်လည်း ကရင်ပြည်နယ်ဝန် ကြီးချုပ်နဲ့တကွ သက်ဆိုင်ရာဌာန အသီးသီးကို တိုင်စာတွေပို့ထားခဲ့ ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာက ဒီနေ့ချိန်အထိ ဘာမှထိ ရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိ တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ မတရားအသိမ်း ခံထားရတဲ့ စိုက်ပျိုးမြေတွေ ပြန်လည်ရရှိဖို့ ဒီကနေ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု အတွင်းမဲက နယ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါ် ထူးထူးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ကျေးရွာမှ ရွာသားများအားလုံး၏ မြေဧက ၃၁၇ဒသမ ၇၁ဧကကို DKBA မှဟုဆိုကာ ဗိုလ်ညီညီက ၂ဝ၁၃ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ရွှေမြဝတီမြို့သစ်တည် ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအတွက်ဟု ပြောဆိုသိမ်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုလည်း ထို စဉ်က ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ က ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”DKBA အဖွဲ့က သိမ်းတာဖြစ်လို့ အဲဒီကလူကြီးထံ တင်ပြတိုင် ကြားတော့ မြေသိမ်းဆည်းသူ ဗိုလ်ညီညီဟာ သူတို့တပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပယ်ထားသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူတို့အဖွဲ့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့တာကြောင့် တာဝန်မယူဘူးလို့ပြောပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုသာ တိုင်ကြားပါလို့ အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ ပါတယ်”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဦးသောင်းလှိုင်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာသို့ မြဝတီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ကျော်သူရည်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ သင်္ဃန်းညီနောင်မှ စခန်းမှူးရဲအုပ် နိုင်ဝင်းသိန်းနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက လိုက်ပါစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြသည်။
”ကျွန်တော်တို့ မြို့နယ်ရဲတပ် ဖွဲ့မှူးရုံးကို ဇွန် ၄ရက်မှာ ဆန္ဒထုတ် ဖော်ဖို့ တရားဝင်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ စည်းကမ်းချက်များနဲ့အညီ ကျွန် တော်တို့ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဦး ဆောင်သူကတော့ မဲကနယ်ရွာသား ဦးသောင်းလှိုင်ပါ။ စည်းကမ်းချက်တွေ အားလုံးပြည့်စုံတဲ့အတွက် ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာ ကျွန် တော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီး မြဝတီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ သင်္ဃန်းညီနောင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အင်အား ၂ဝ နဲ့ လာရောက်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေမဖြစ်ဖို့လာရောက် စောင့်ရှောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြဝတီမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ကျော်သူရည်က ပြောကြားသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် တောင်းဆိုချက်စာသားများပါ ဗီနိုင်းဆိုင်းဘုတ်များကိုင်ဆောင် ကြွေးကြော်ကြပြီး ရွှေမြစန္ဒီမြို့သစ်၊ သစ်လွင်လမ်းထိပ်မှ ဦးစောလားဘွယ်လမ်းအတိုင်း စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြကာ ‘သဗ္ဗသုခ’ တပ်ဦးစေတီအထိ ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြကြောင်းသိရသည်။
ရွှေဘိုမြို့ရှိ အလောင်းမင်းတရားကြီး၏ နန်းတော်အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ နှစ်?
သာသနာနွယ် ဖောင်ဒေးရှင်းမှ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆေးရုံသံ
မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ်(၁) တံတားကြီးပေါ်တွင် ထိုင်းဘက်ခြမ်းကဲ့သို့ အမြဲသန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် မြန်မာဘက်ခြမ်း၌ စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်
ဖြူးချောင်း ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား ကျပ်သိန်း ထောင်နှင့်ချီ ဆုံးရှုံး
ထိုင်းကုမ္ပဏီနှင့်ပေါင်းကာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စက်သုံးဆီဆိုင် ၇ဝ ဖွင့်မည်